Nkọwa ụlọ ọrụ - ABC TOOLS MFG. CORP.
ABC ngwaọrụ MFG. CORP.
ABC ngwaọrụ MFG. CORP. e guzobere na Qingdao, China na 2006. Pụrụ iche na n'ichepụta mma Nchekwa shelf (boltless shelf, okpukpu abụọ dị elu shelf, mkpọchi mkpọchi, mkpokọta shelving, treadplate welded rack, corner shelving, 3 tier mobile cart), Ubube(fiberglass nzọụkwụ ladders, faiba glaasi n'elu ikpo okwu ladders, faiba glaasi ndọtị ladders, faiba glaasi ejima nzọụkwụ ladders, aluminum nzọụkwụ ladders, aluminum ikpo okwu ladders, aluminum articulate ladders, aluminum sawhorses, ezinụlọ ígwè nzọụkwụ stool, aluminum nzọụkwụ stool), Trugbọala Aka(steelgbọ ala aka, ụgbọ ala aluminom, mpịachi ụgbọ ala Aluminium, nke nwere ike ịgbanwere aluminum, nke a na-atụgharị ala Aluminom, mpịakọta ụgbọ ala, ụgbọ ala ogige na oche) na ihe ndị ọzọ.
Officelọ ọrụ anyị emi odude ke No.758, Shui Lingshan Road, Huangdao District, Qingdao, Shandong, China. Ndị ọrụ na-ere ahịa ji obi ha niile na-ejere gị ozi yana ndị ọrụ ịzụta, ndị ọrụ ego, HR, wdg.
Iji nwekwuo ike ijere ndị ahịa ozi, Ngwaọrụ Abc eguzobewo ụlọ nrụpụta atọ n'ụwa niile: ụlọ ọrụ China, ụlọ ọrụ Vietnam, na ụlọ ọrụ Thailand.
*Chinalọ ọrụ China anyị ekpuchi 20,000 square mita na nwere ihe karịrị afọ 15 nke n'ichepụta na ọla ationgha ahụmahụ. O nwere ahịhịa iri abụọ na isii na-akpụ akara ahịrị, faiba glaasi na-adọta ahịrị ahịrị, ahịhịa mkpuchi ntụ ntụ abụọ, usoro asaa nke 7, yana ikike nke nde 2 na 2020.
* Vietnamlọ ọrụ anyị Vietnam nwere igwe ohuru ohuru nke n’eme ka ihe kachasi nma na onu ahia di ala n’ebe obula. Ọ nwere 18 shelving ala akpụ edoghi, 2 akpaka uzuzu mkpuchi edoghi, 3 Trolley mmepụta edoghi, na ike nke 1.8 nde iberibe na 2020.
* Facilitylọ ọrụ anyị Thailand a na-ewu ...
Ka ọ dị ugbu a, Ngwaọrụ Abc ewepụtala ihe karịrị otu narị ngalaba dị iche iche, ubube, na gwongworo aka, bụ ndị a na-ebupụ gaa mba 66 gburugburu ụwa. Anyị bụ ndị ọtụtụ mba ma ama ụdị soplaya na e ukwuu kwuru nke zuru ụwa ọnụ ahịa na anyị magburu onwe ya mma, na-adọ nnyefe, na ezi ọrụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ahọrọla ngwaahịa Abc Ngwaọrụ.
Site na afọ 15 nke mmepe, anyị wuru a mmepụta na nhazi ogbako ekpuchi 20,000 square mita. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ nrụpụta ọkọlọtọ ekpuchiri mita square 36,000 ka a ga-arụ ọrụ n'afọ a. Hlọ ọrụ mmepụta ihe anyị na ụlọ ọrụ SHELVING na Vietnam agafeela Walmart factory Audit, ya mere a na-ebufe ngwaahịa abụọ a ozugbo na Vietnam. Anyi na achokwa iru ulo oru ohuru na Thailand n’aho a ma zuta ogwa ndi ozo n’ime obodo iji belata onu ahia, nke bu uru anyi bara uru na ahia US
Onye Ọrụ Nkà
R & D Injinia
Ogbe shelf Obere Nchekwa Obere Shelf maka ulo Mpempe akwụkwọ nchekwa edo edo Ngalaba Na-ahụ Maka Azụmaahịa Ime ụlọ ime ụlọ